Ividiyo: Ukulahlwa kwenqola yokuthenga noListrak | Martech Zone
ISonto, Ephreli 24, 2011 NgoLwesithathu, Novemba 30, 2011 Douglas Karr
Njalo ngesikhashana ngenkathi upheqa Youtube, uthola igugu. Le vidiyo evela kuListrak yashicilelwa ngoFebhuwari lapho bethula isisombululo sabo sokulahla inqola yokuthenga, kepha bengifuna ukuyishicilela lapha ngezizathu ezimbalwa. Okokuqala, ukubuka konke okuhle ngokuthi yini ukulahlwa kwenqola yokuthenga… okulandelayo, yividiyo enhle futhi ngiyethemba ukuthi uListrak ukhiqiza ezinye zazo.
Nawa amaphuzu avelele avela ku- Uhlu lwemininingwane yomkhiqizo we-Listrak:
Ngokwengosi kaListrak, izinqola zokuthenga ezilahlwe online ziyinkinga kubiza abathengisi abaku-inthanethi ama-71% wokuguqulwa kwabo okulingana ngaphezulu kwe- $ 18 billion ngonyaka. Isiza sikaListrak sine- isibali sokubala senqola esilahliwe ukuze ukwazi ukulinganisa ngokushesha ukulahleka kwakho.
Isixazululo sokumaketha kabusha kwenqola yokuthenga sikaListrak siphinda sithathe izinqola zokuthenga ezilahliwe futhi sinikeze namathuba okubandakanya abathengi kabusha ngokunikezwa okwenzelwe wena nemiyalezo efanele. Kusetshenziswa isoftware yabo, umkhankaso wokuzibandakanya kabusha ungaba yi-imeyili eyodwa noma ungahlakulela ukusakazwa kwama-imeyili ukukhulisa ukuguqulwa.
Ukulahlwa kwenqola yokuthenga akuyona nje into ene-eCommerce. Noma iyiphi indawo yenkampani esetshenziselwa imizamo yokumaketha engenayo ngokuvamile iba nobuthakathaka lapho izivakashi zilahleka khona lapho kuguqulwa. Ngezinye izikhathi, kungenxa yokuthi ukwakheka okungalungile akukuhlinzeki nganoma yisiphi isisusa sokuzibandakanya ngokuqhubekayo. Ezinye izinkinga zingaba ifomu elibanzi, izikhathi ezilayishwa zokulayisha ikhasi, noma ezinye izingqinamba.
Uma ungathuthukisa izindlela zokuzibandakanya kabusha lezo zilaleli, ngokujwayelekile uzothola ukuthi amazinga akho wokuguqulwa azodlula noma yikuphi ukuguqulwa okutholayo kubavakashi abasha.